Sivivinye i-Aukey's USB-C Hub, i-8-port konke okukodwa okulungele iMacBook M1 entsha [UKUBUYEKEZA] | Izindaba zamagajethi
UKarim Hmeidan | | Izesekeli
Enye yezinkinga ezinkulu engihlangabezane nazo ngenkathi ngithola okusha IMacBook Pro eneprosesa ye-M1 bekungukushoda kwamachweba, inkinga ekhula njalo kusukela imfashini, ikakhulukazi kwa-Apple, ukwethula amadivayisi anamachweba ambalwa futhi ambalwa. Abafana be U-Aukey kumele ngabe ufunde ingqondo yami futhi wasinikeza ihabhu labo elisha le-8-port USB-C.
Kuyathakazelisa I-Hub 8 in 1 ozoyeka ngayo ukuba nenkinga yokushoda kwamachweba kumakhompyutha akho. Ubulula buhambisana nokuguquguquka emikhiqizweni kusuka komunye wemikhiqizo ekhula ngokushesha kakhulu ku-ecosystem yezobuchwepheshe. Qhubeka ufunde ukuthi sikutshela yonke imininingwane yale Hub ye-Aukey USB-C.
Konke kufanele kushiwo, yiHub, ungalindeli okuthile okungajwayelekile, a Ihabhu elinamachweba ayi-8 azoxazulula ngokuyisisekelo zonke izinkinga zetheku esingaba nayo kunoma iyiphi idivayisi. Yi-Plug ne-Play ngakho-ke kuzodingeka siyixhume kuphela ethekwini le-USB-C ukuze i-Aukey yenze wonke umlingo odingekayo ukuze iziphazamiso zethu zisebenze.
Njengoba ukwazi ukubona ezithombeni, i- idivayisi yinhle impela, endaweni «emnyama emnyama» ifana kakhulu nombala i-Apple eyenza ama-Mac ayo. Phezulu sizobona isimo esisodwa esiholelekile esingaphazamisi nhlobo, y ezinhlangothini sinazo zonke izimbobo ukuthi abafana base-Aukey basinikeza.
Njengoba ukwazi ukubona kugalari yangaphambilini, sinamachweba alandelayo:
I-USB-C enokulethwa kwamandla okuzokuvumela futhi ukuthi ukhokhise iMac yakho uma usebenzisa enye imbobo ye-USB-C esele enye idivayisi.
Isikhumulo I-HDMI iyahambisana nezinqumo ze-4K.
Amachweba we-3 USB-A (2 kubo 3.0 ebhalwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka).
Isikhala esisodwa sekhadi le-SD, ilusizo kakhulu uma kubhekwa ukuthi ayibalwa ama-laptops amancane.
Isikhala sekhadi le-MicroSD.
Imbobo ye-Ethernet, ngama-LED amabili azomaka isimo sokuxhumeka (asikwazi ukuwakhubaza kepha awazihluphi kakhulu).
Njengoba ubona, asikwazi ukuphuthelwa noma yiliphi ithekuKodwa-ke, kufanele siqaphele uma sizisebenzisa zonke ngasikhathi sinye, ikakhulukazi ukuze iHuba lishise futhi lingasebenzi kahle. Njengengxenye embi ngizophinda futhi ngithi yi-USB-C Hub, akuyona iThunderbolt 3, kepha ngokusobala ngentengo emakethwayo kuyindlela enhle. I-Thunderbolt 3 ivumela isivinini esiphakeme futhi imvamisa inikwa amandla ngaphandle.
Enye yezinzuzo zale 8-in-1 USB-C Hub yiyona size, ephathekayo kakhulu, futhi nabafana bakwa-Aukey basinikeza i- ikesi lokuthwala elihle nokuthi uvikele ngayo ikhebula le-USB-C leHub. Ngaphandle kokungabaza, imininingwane eyaziswa.
Ayikho imikhiqizo etholakele., njengoba ngikutshela ukuthi iyi- inketho enhle kakhulu kunoma ngubani othenge iMacBook Pro noma i-Air entsha ngeprosesa ye-M1Ekugcineni amachweba anqunyelwe futhi ngehabhu lalezi zici sesisombulule inkinga yezimbobo. I- Intengo imvamisa iphakathi kwama- € 35 yize ungayithola kwesinye isikhathi icishe ibe ngu- € 20. Ngiyayincoma, sengivele ngikutshela ukuthi akuyona i-HUB yokuduma kwezulu kepha ezimweni eziningi lapho udinga khona itheku elengeziwe uphana impela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Izesekeli » Sivivinye i-USB-C Hub ka-Aukey, i-8-port all-in-one ephelele iMacBook M1 entsha [REVIEW]